Wararka Maanta: Isniin, May 28, 2012-Xukuumadda Turkiga oo sheegtay inaysan Somalia ka lahayn dano gaar ah, aysanna u arag meel ay khatari ka jirto
Mr. Davutoğlu ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu ka jeedinayay shir looga hadlayo mustaqbalka Soomaaliya oo shalay oo Axad ahayd ka furmay magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
"Soomaaliya waxay noqotay goob aad muhiim ugu ah siyaasadda dibadda ee dalka Turkiga, waxaana taas sabab u ah xiriirka adag ee fog ee labada dal u dhexeeya," ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Turkiga. "Soomaaliya uma aragno meel naga fog, balse waxaan u arkaynaa goob ay ka jirto xadaarad fog."
Shirka ka furmay dalka Turkiga ayaa waxaa ka qaybgalaya odayaasha-dhaqanka ee uu shirku uga socday Muqdisho, aqoonyahanno iyo ururrada bulshada rayidka ah, kaasoo lagu wado in looga hadlo ayaaha dalka Soomaaliya, inkastoo ay maamullada dalka ka jira qaarkood diideen ka qaybgalkiisa, iyagoo sheegay inay arkaan siyaasad ku dhisan.
"Turkigu kaalin weyn ayuu ka qaatay in indhaha caalamku ay u jeestaan Soomaaliya tan iyo markii uu ra'iisul wasaaraha Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan booqday Soomaaliya bishii Ogoosto ee sannadkii hore,” ayuu Davutoğlu; isagoo intaas ku daray in Turkigu uu Soomaaliya dib uga furay safaaraddiisii, sidoo kalena ay Turkish Airlines billowday inay duulimaadyo caalami ah ku tagto Muqdisho.
Wasiirku wuxuu sheegay in madaxda Turkigu ay ku guuleysteen inay Soomaaliya tagaan iyadoo caalamka intiisa kale uu dibadda ka daawanayo dhibaatada gudaha ka socotay. Wuxuuna xusay in xilligaas kaddib uu Turkigu u diray Somalia hay'ado samofalka ah iyo siyaasiyiin sarsare.
"Innagu waxaan go'aansannahay inaan Soomaalida kala qaybqaadanno sidii ay dib ugu dhisi lahaayeen Qarankooda. Uma aragno Soomaaliya meel dano gaar ah laga raadiyo, umana aragno meel ay khatari ka jirto," ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga.
Ugu dambeyn, wasiirku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay u arkaan meel ay colaado daashadeen, sidaa daraadeedna ay go'aansadeen inay dadaal fara badan ku bixiyaan sidii ay shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ugu bixi lahaayeen.